Kitapo fanamafisana iray ho an'ny malefaka
Kitapo fanamafisana iray ho an'ny gorodona
Kitapom-batana iray ho an'ny foaming
Kitapom-batana iray ho an'ny fampiharana ara-pahasalamana
Kitapom-batana iray ho an'ny profil
Kitapo fanamafisana iray ho an'ny mangarahara
Fampisehoana takelaka PVC
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-19
General resin PVC resin dia vovoka mavo fotsy na maivana miaraka amin'ny 1.35-1.45. Ny hamafin'ny vokatra azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampidirana plastika. Miorina mekanika PVC manana hamafin'ny hafanana sy mekanika. Ary mitombo amin'ny fitomboan'ny lanjan'ny molekiola, bu ...
Ny loko voajanahary amin'ny polyvinyl chloride (PVC) dia mavo sy mamirapiratra. Ny mangarahara dia tsara kokoa noho ny polyethylene sy polypropylene, fa ratsy kokoa noho ny polystyrene. Miankina amin'ny habetsaky ny zavatra ampiana, azo zaraina ho klôroôro polyvinyl malefaka sy mafy izy io. Malefaka ny vokatra malemy ary ...
Karazana plastika inona no pvc?
Ny PVC dia plastika misy singa maromaro izay azo volavolaina sy azo zahana amin'ny fomba isan-karazany, miaraka amina karazana vokatra sy fampiasana maro samihafa. Amin'ny alàlan'ny fitambarana resina sy additives tsara indrindra hihaonana amin'ny fanodinana sy ny fampiasa amin'ny famolavolana, ny vokatra tsara indrindra dia azo. Mba hanaovana izany, ...
Inona no fitaovana atao hoe pvc? Ny résin PVC dia manana tombony amin'ny fahamendrehana simika tsara, toetra mekanika avo lenta, insulation elektrika tena tsara, retardant flame ary famonoana tena ary vidiny ambany. Na izany aza, tsy dia milamina ihany koa ny toetr'andro, ny maripana ambany fampiasa, ny volan'ny vokatra mafy, a ...
Fandinihana lalina momba ny toe-java-misy ankehitriny an'ny polyoxygenated adhesives ho an'ny fitaovana PVC any Shina
Ny molekiola ao amin'ny lakaoly be olona ao amin'ny PVC dia misy fatorana urethane polar (iray NHC00 iray), ary misy fatorana estera maro, fatorana ether, fatorana urea sns. Izy io dia manana fananana mifamatotra tsara amin'ny fitaovana isan-karazany. He Yicai dia namaritra ny famolavolana pol iray miorina amin'ny solvent ...
Ny resina PVC dia vovoka mavo fotsy na mavo. Ity resin ity dia tsy azo ampiasaina mivantana, fa tsy maintsy ovaina amin'ny fampidirana modifier isan-karazany mba hanomanana vokatra isan-karazany. Araka ny fampiasana vokatra samy hafa dia azo ampiana fanovana isan-karazany mba hampisehoana toetra ara-batana sy mekanika samihafa. Manampy ny appr ...
Nilaza ny injenieran'ny mpanamboatra cpvc: Ny resina CPVC dia natao tamin'ny fanovana ny resin isopropyl titanate PVC, izay karazana vokatra vita amin'ny fingotra vaovao. Vovoka résin CPVC dia vovoka fotsy na mavo mavo. Rehefa vita ny resina PVC dia mandeha ny isopropyl titanate, nohatsaraina ny tsy fanarahan-dalàna ny fatorana molekiola, ny op ...
Ny fantsona cpvc dia matetika ampiasaina amin'ny fitaterana ny maloto sy ny haino aman-jery manimba tsiranoka simika. Ny vidin'ny cpvc akora dia avo kokoa noho ny halafarany, ka mitombo ny vidin'ny fantsona cpvc. Ny zavamaniry fanodinana sasany dia hampiasa fantsona pvc fa tsy izany, mba hahafahan'ny pvc manolo ny fantsona pvc manuf ...
pvc fanodinana material sy famolavolana polyvinyl chloride
Ny dingan'ny famolavolana ireo fantsona polyvinyl chloride dia mila manomboka amin'ny fitaovana pvc. Voalohany, ny rijan-kevitra ara-materialy dia azo zaraina ho malefaka polyvinyl chloride sy polyvinyl chloride henjana arakaraka ny isan'ny fampiasana stabilizers, plastika ary lubricants. Polyvinyl chl avo lenta ...
Ohatrinona ny pellet pvc taonina?
Plastika pvc ve? Polyvinyl chloride (pvc) dia iray amin'ireo plastika dimy mahazatra ampiasaina. Ny maha samy hafa ny pvc sy ny plastika dia ny plastika misy pvc, izay ny sokajy ambony amin'ny pvc. Ohatrinona ny pellet pvc taonina? Noho ny fisian'ny fampiharana pvc marobe, ny vokatra dia isan-karazany ihany koa. ...
Ny tsy fitovizan'ny pvcu sy ny upvc
avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-08
1. Ny zoro fananganana: ny mpanamboatra fantsom-pvc dia mampiditra pvc-u no tena ampiasaina amin'ny fananganana rano sy fantson-drano, fantsona efa napetraka, ny fomba fanamboarana lehibe dia miempo, lakaoly ary tsy mora ny manamboatra amin'ny ririnina; upvc dia ampiasaina amin'ny fananganana rano sy famatsian-drano, fantsom-pako, ...
Akora simika amin'ny fantsom-panafody rano PE
Ny resina PE dia alefan'ny polimeran'ny eomerômanera monomer. Noho ny fahasamihafan'ny fanehoan-kevitra polymerization hafa toy ny tsindry sy ny mari-pana mandritra ny polymerization, azo raisina ny resins amin'ny habe samihafa. Noho izany, misy polyethylene avo lenta, polyethylene avo lenta ary polye ambany ambany ...
Pvc Heat Stabilizer, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Stabilizer, Pvc Additives,